Isi mmalite: Epimedium grandiflora
Akụkụ ejiri: Osisi & Akwụkwọ
Agwa Ahụ: Agba aja aja aja aja, na-esi isi pụrụ iche
Chemical mejupụtara: Icariin
Molekụla Arọ: 676.6617
Epimedium wepụ nwere ike ịbawanye ọbara obi, na-akwalite ọrụ hematopoietic, ọrụ mgbochi na ọkpụkpụ metabolism, ma nwee mmetụta nke ịmịpụta akụrụ, mgbochi ịka nká na mgbochi akpụ.
1.Epimedium na - eme ka mmekorita nwoke na nwanyị nwee mmekorita site na ịmịpụta semen na mmepụta testosterone, yana ike na Mmepụta hormone mmekọahụ.Ọ na-ejikwa ya na ọgwụ ndị China na-agwọ ọrịa akụrụ.
2.Enhance dịghịzi ọrụ nke ahụ, welie ma nọgide na-enwe adrenal cortex ọrụ na dịghịzi ọrụ.
3. Gbanyụọ usoro ịka nká ma gbochie omume nke ọrịa ndị metụtara afọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-emetụta ntụgharị mkpụrụ ndụ, na-agbatị oge uto, na-achịkwa usoro mgbochi na nke nzuzo, ma melite metabolism na ọrụ nke akụkụ dị iche iche.
4.Ọ nwere mmetụta nchekwa na obi, na-ebelata nguzogide cerebrovascular, nwere mmetụta nchekwa ụfọdụ na ischemia myocardial nke pituitrin kpatara, ọ na-enye aka maka ọgwụgwọ ọrịa obi na akwara na angina pectoris.
5.Epimedium wepụ nwere ike igbochi nchịkọta platelet na thrombosis. Ọ nwere ike ịkwalite ọdịiche na mmụba nke mkpụrụ ndụ ọbara dịgasị iche iche ma kwalite ọrụ hematopoietic.
Nke gara aga: Mkpụrụ Akwụkwọ Olive
Osote: Sophora Japonica wepụ
Agba aja aja odo ntụ ntụ
100% site na 80 ntupu
Epimedium Wepụ Akuku Parts
Epimedium akwukwo wepụ
Vega 100 Epimedium wepụ